Fake information ဟုတ်မဟုတ် စစ်ကြည့်ပြီးမှယုံပါ | Online Service Center Myanmar -->
Fake information ဟုတ်မဟုတ် စစ်ကြည့်ပြီးမှယုံပါ
ဒီ​နေ့မနက်​ Messenger ဝင်​ကြည့်တော့ ဒီအ​ကြောင်းအရာကို Forward လုပ်​​နေတာ​တွေ့ရတယ်​။ သူ့အ​ကြောင်းအရာက ဇူကာဘတ်​က Facebook သုံးစွဲသူတိုင်းကို Facebook သုံးတဲ့အတွက်​ အခ​ကြေး​ငွေ​ပေးရ​တော့မယ်​ဆိုတဲ့ပုံစံ​ရေးထားတယ်​။ ဒါကို ယုံတဲ့သူ​တွေကယုံကြတယ်​။
Facebook.com ကိုဝင်​လိုက်တာနဲ့ "Facebook account ဖွင့်သုံးမယ်ဆို လူတိုင်းအတွက်အမြဲတမ်း အခမဲ့ပါပဲ" လို့ ပြောထားတာတွေ့ရမယ်​။
အခုလို Fake news ​တွေ ​တွေ့တိုင်း အစစ်​အမှန်​ဟုတ်​မဟုတ်​ဆိုတာကို အလွယ်​တကူစစ်​ကြည့်လို့ရနိုင်​ပါတယ်​။
1. Facebook Newsroom ( newsroom.fb.com/news ).
Facebook က Official News ​တွေထုတ်​ပြန်​​ပေးတဲ့ News Room မှာ ကိုယ်​​တွေ့တဲ့သတင်း or အ​ကြောင်းအရာ ဟုတ်​၊ မဟုတ်​ ဆိုတာကို စစ်​​ဆေးကြည့်လိုက်​ရင်​ Fake news or Real news လားဆိုတာ သိသွားပါလိမ့်မယ်​။
2. Facebook Page( fb.com/facebook )
ဒီလိုအ​ကြောင်​းအရာမျိုး​တွေဆိုရင်​ Facebook ရဲ့ Official page က​နေ တရားဝင်​ထုတ်​ပြန်​ထားပါလိမ့်မယ်​။ Facebook official page က​နေ​တောင်​ ထုတ်​ပြန်​မထားဘူးဆိုရင်​ Fake News ဆိုတာ သိသွားပါလိမ့်မယ်​။
3. Mark Zuckerberg ( fb.com/zuck ).
ဇူကာဘတ်​က ​ပြောထားတာဆိုရင်​ ​သေခြာတာက သူ့အ​ကောင့်မှာ​သေခြာ​ပေါက်​တင်​ထားမှာပါ။ သူ့အ​ကောင့်မှာ​တောင်​တင်​မထားတဲ့အ​ကြောင့်အရာဆိုရင်​ Fake news ဆိုတာ သိသွားပါလိမ့်မယ်​။
4. Google ( google.com )
Google search box ထဲမှာ Facebook နဲ့ပတ်​သက်​တဲ့ အချက်​အလက်​​တွေကိုရိုက်​ရှာကြည့်ပြီး ကိုယ့်ဆီ​ရောက်​လာတဲ့အချက်​အလက်​က မှန်​ မမှန်​ဆိုတာ စစ်​​ဆေးကြည့်လိုက်​ရင်​ Fake news ဟုတ်​၊ မဟုတ်​ဆိုတာ သိသွားပါလိမ့်မယ်​။
​ပေါ်ပင်​မှာ​ပျော်​ရွှင်​တတ်​သူ​တွေအ​နေနဲ့ ဒါ​လေးကို Friend ဘယ်​နှ​ယောက်​ဆီကို Share ​ပေးလိုက်​ရင်​ Facebook က ဘာ​ပေးမှာပါ၊ ဘာလုပ်​​ပေးမှာပါဆိုတဲ့အရာ​တွေကို လုံးဝမှအယုံအကြည်​မရှိကြပါနဲ့၊ လိုက်​မလုပ်​ကြပါနဲ့ Facebook က ဘယ်​​​တော့မှအဲ့လိုလုပ်​ခိုင်​းမှာမဟုတ်​လို့ပါ။
ကဲ.... ဒီ​လောက်​ပဲ​တော်​​သေးပြီ။ ​နောက်​ဆို ဒါမျိုး​တွေ​တွေ့လာခဲ့ရင်​ ကိုယ့်ဘာသာ​လေ့လာစူးစမ်းပြီးမှ ယုံကြပါလို့ပဲ​နောက်​ဆုံးအ​နေနဲ့​ပြောချင်​ပါ​တော့တယ်​။
Aung Kyaw Soe ( 4.7.2019 - 1:07 PM )